बैंकका कर्मचारीलाई जम्मा एक महिना विदा ! (सूचनासहित) | Butwal Dainik
बैंकका कर्मचारीलाई जम्मा एक महिना विदा ! (सूचनासहित)
१५७५ पटक पढिएको
काठमाडौं :- बैंकका कर्मचारीलाई ३१ दिन बिदा दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ वर्ष २०७८ मा कर्मचारीलाई ३१ दिन बिदा पाउने व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि, राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले यसअघि नै सूचना प्रकाशन गरि २०७८ सालमा हुने बैंक बिदाका लागि जानकारी गराइसकेको छ ।